तरल राजनीति : ओली सरकारको निरन्तरता देखि महन्त ठाकुरसम्मका विकल्पमा बहस – Kendra Khabar
तरल राजनीति : ओली सरकारको निरन्तरता देखि महन्त ठाकुरसम्मका विकल्पमा बहस
२०७७, २८ फाल्गुन शुक्रबार ०९:२०
झण्डै दुई तिहाईको संख्यामा प्रतिनिधिसभामा आफ्ना सदस्य रहेको नेकपा भित्रको आन्तरिक कचिङ्गलबाट सुरुभएको अस्थिर राजनीतिको यात्रा एमाले र माओवादी केन्द्र साविक अवस्थामा आइपुग्दा झन जटिल मोडमा पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरिदिएपछि तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको मोर्चामा उभिएका प्रचण्ड–माधव पक्ष छिन्नभिन्न भएको छ । प्रचण्ड पक्ष माओवादी केन्द्रमा रुपान्तरित मात्र भएको छैन, आफ्ना केही हस्ती एमालेमा सुम्पन ुपर्दा रन्थनिएको झोकमा पार्टीको नाम नै परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिमा फेरिने नामको विषयमा चर्चा भएको बाहिर आएको छ । फिरिने पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी या नेकपा पछाडि फुर्को झुण्ड्याएको राख्ने भन्ने विषयमा बहस भएको र सम्भवत त्यही अनुरुप अगाडि बढ्ने मोडमा सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका छन् । नाम फेरिने पक्का पक्कि नै रहेको उक्त पार्टी स्रोत बताउँछ ।
समुहको आधार नै सर्वोच्चले भत्काइदिएपछि माधव नेपाल समूह पनि एमालेमा परिणत भयो । तर, उक्त समुहका नेताहरु एमाले भएर काम गर्नभने पाएका छैनन् । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले आफूहरुसंगै पार्टीमा निर्वाचित भएका उपाध्यक्ष भिम रावल सहित पार्टीका सबै पदाधिकारी पनि एमाले बनेको महसुस् गरिरहेका छैनन् या भाउ दिन चाहिरहेका छैनन् ।
पार्टीमा यस अगाडि नेतृत्व समालेका वरिष्ट नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसहित उनीहरुको नेतृत्वमा रहेका नेताहरु पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्ने आँटमा छैनन् । उनीहरुका गतिविधि अहिलेपनि होटलबाट नै सञ्चालित छन् । उनीहरु केही त भनिरहेका छन् तर, सुनुवाई भइरहेको छैन । सुनुवाई नभए के गर्ने भन्ने पनि सायद त्यो समुहमा छलफल चलिरहेको होला । विघठित नेकपामा प्रचण्ड समुहको सहकार्यमा कारबाही गरिएका पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीलाई अध्यक्ष मान्नुपर्ने र एमाले हुनुको नाताले प्रधनमन्त्रीमा ओलीलाई निरन्तरता दिने कुरामा सहमत हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा यो समुह छ ।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको पक्ष अदालतले आफूलाइ जिताएको महशुस् गर्दै प्रशन्न मुडमा छन् । अध्यक्ष ओली र उनको पक्ष अहिले एमाले आफूहरु रहेको र झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्ष कतैबाट पार्टीमा भित्रन खोजेको बुझाई र मनोविज्ञानमा छ । सायद केही उन्माद पनि यो पक्षमा देखिन्छ । झलनाथ–माधव पक्षलाई भाउ नदिने मुडमा रहेको व्यवहारिकरुपमै यो पक्षले प्रष्ट्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
ओली पक्षीय अधिकांस नेता कार्यकताहरु माओवादी केन्द्रबाट एमालेमै रहेका नेतालाई स्विकार गर्न तयार तर, खनाल–नेपाल पक्षलाई स्विकार गर्न तयार नरहेको व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश पार्टी कार्यालय र अन्य केही कार्यालयमा बोर्ड फेर्ने क्रममै यस्तो व्यवहार प्रकट भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुल रुपमा अब आफ्नो पार्टीमा अप्ठ्यारो पार्ने हैसियतमा खनाल–नेपाल समुह नरहेको निस्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
ओली सरकार र भावी समिकरणका सम्भावना यस्ता
नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा जनता समाजवादी पार्टीसंग मिलेर सरकार टिकाउने पक्षमा छ । यसका लागि उक्त पार्टीले राखेको एजेण्डामा सम्झौता गर्ने पक्षमा समेत उक्त पार्टी पुगेको छ । एमालेले कांग्रेसको साथ पनि लिन खोजिरहेको छ ।
एमालेका नेताहरु सके सिंगो जसपा नभए जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई चोइट्याएर भएपनि समर्थ बटुल्ने कसरतमा छ । यसका लागि केही चरणका छलफल र वार्ता समेत भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली सरकारलाई विगतमा समर्थन गरेर सरकारमै सामेल हुँदापनि आफ्ना एजेण्डाको सुनुवाई नभएको दुखेसो जसपाले सुनाएको छ । यसमा अब कसरी समावेश गरेर जान सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओली सम्झाउने प्रयत्नमा छन् ।
संसदमा दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता समिकरणको जोड घटाउमा अरुची देखाई रहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेपनि सत्तामै रहेको भ्रम पालिरहेको कांग्रेसकै नेताहरु टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारले संबैधानिक आयोगहरुमा गरेको नियुक्तिमा भाग पाइएकै छ’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘देउवा अहिले पनि सरकारमै रहेको भ्रम पालिरहेका छन् ।’ यद्यपी माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा कांग्रेसले आफ्नो मौनता तोड्ने मात्र होइन सत्ताको नेतृत्वकै दबेदारी गर्नेछ ।
विपक्षी दलको नेता स्वभाविक भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा लिने गरिएको छ । एमालेलाई जस्तो सजिलो कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व लिन सहज छैन । उसले माओवादी केन्द्रको र जसपाको साथ लिनुपर्ने छ । माओवादी केन्द्र विनासर्त ओली सरकार ढाल्न र नयाँ समिकरण निर्माणमा लागेको भएपनि जसपाले भने सर्त तेसार्दा कांग्रेसका लागि पनि सत्ता आरोहण त्यति सहज देखिन्न ।
संसदमा तेस्रो दल बन्न पुगेको माओवादी केन्द्र ओली सरकार जसरी पनि ढाल्ने ध्याउन्नमा छ । यसका अध्यक्ष प्रचण्ड सबैढंगले ओली सरकार ढाल्न लागिपरेका छन् । तत्कालिन नेकपामा माधव नेपाल समुहको साथ पाएका प्रचण्ड साथ छुटेपछि थप रन्थनिएका छन् । कांग्रेसले अग्रसरता नलिँदा र आफ्ना केही नेता एमाले तर्फ जाँदा माओवादी केन्द्र अप्ठ्यारोमा छ ।
ओली सरकार ढले महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न विपक्षीले गरेको प्रयास सफल हुँदा संसदमा चौथो शक्तिमा रहेको जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने आंकलन समेत हुन थालेको छ । राजपाले समर्थन नगर्दा ओली नेतृत्वको विकल्प खडा नहुने र विकल्पका लागि आफ्नै नेतृत्व जसपाले खोज्न सक्ने औल्याइएको छ ।
जसपाको भित्रि इन्टेन्सन नै त्यहि रहेको उक्त पार्टीका एक नेता बताउँछन् । आफ्नो नेतृत्व नहुँदा जसपाको एउटा पक्ष फुटेरै भएपनि ओली सरकारमा सामेल हुनसक्ने जोखिम उक्त पार्टीमा छ । जसरी पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुभन्दा जसपाकै नेतृत्वमा भएपनि सरकार बनाएर भएपनि सरकार ढाल्दा आफ्नो स्वार्थ पुरा हुनेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कन्भिन्स हुनेछन् । ओली सरकार ढाल्न जस्तोसुकै जोखिम मोल्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तयार छन् । जसपामा पनि उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई ओली सरकारको विदाई चाहन्छन् । पार्टी विभाजन पनि रोकिने र ओली सरकारपनि ढल्ने हँदा उनीहरु आफ्नो पार्टीका सहकर्मी ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमत हुनेछन् ।
सरकार ढल्दा स्वभाविक प्रधानमन्त्रीका दाबेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भन्दापनि अफूलाई पुनः पार्टी सभापतिमा दोहो¥याउन चाहन्छन् । आफ्नो पक्षलाई मजवुद पार्नेगरी केही नेतालाई सरकारमा पठाउँदा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र आफ्नै पार्टीबाट जसपामा गएका महन्त ठाकुर प्रति उनी नरम पनि रहेकाले यो विकल्पमा देउवा राजी हुनसक्ने कांग्रेस स्रोतले नै बताएको छ ।